प्राकृतिक स्रोतसाधनको समूचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि : डा महत « Lokpath
२०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार १०:५४
प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार १०:५४
पोखरा । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्राकृतिक स्रोतसाधनको समूचित व्यवस्थापनबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।
बिपीको समाजवादी चिन्तन वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री डा. महतले काङ्ग्रेसले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार मात्र नभै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले सम्बद्ध सबैको सहकार्यमा आर्थिक विकास सम्भव भएको बताए । वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको नेता महतको आरोप थियो ।